SoundPeats Q30, waxaan ku lafagureynaa codka ugu sareeya qiimo jaban | War gadget
SoundPeats Q30, waxaan ku lafagureynaa codka sare qiime jaban
Miguel Hernández | | La cusboonaysiiyay 17/02/2020 11:59 | General, Reviews
Telefoonada dhagaha ee gebi ahaanba waa wax dimuqraadi ah, oo aad uga fog wixii hore u dhacay, markii aan astaamahaan ku helnay qalab qaali ah iyo dhagaystayaal aad u yar. Maanta waxaan ku jirnaa gacmaheena (ama halkii dhagaheena) SoundPeats Q30, samaacado sameecado leh oo leh fursado badan iyo qiimo aad u soo jiidasho leh.
Sida caadiga, Waxaan falanqeyn doonnaa qeybaha ugu xiisaha badan ee sameecadaha dhagaha si aan si weyn uga faa iideysano lacagteenna ogowna haddii aan wajaheyno headset cabirkeena. Markaa nala joog markasta, waxaad ku leedahay dib-u-eegista ugu fiican Actualidad Gadget.
1 Naqshadaynta dhagaha
1.1 Tusmada xirmada
3 Diyaar u noqo xaalad kasta
Waxaan ku bilownay sidii caadiga ahayd, naqshadeynta calanka. Halkan SUndPeats ma aysan dooneynin inay wax badan soo cusbooneysiiyaan iyaga oo dooranaya naqshad maanta jirta taasina waxay kuu xaqiijineysaa inaad ugu yaraan guuleysato. Dhagaha sameecadahaani waxay leeyihiin nidaam dhegta-dhegaha ah oo ay weheliso jillaab bannaanka caadiga ah oo la jaan qaadi doona laalaabka dhagtayada (oo aan ahayn qaab haysa) waxayna si buuxda uga horjoogsan doontaa inay hoos u dhacaan haddii ay dhacdo kormeer. Astaantan, iyo kuwo kaleba, waxay SoundPeats Q30 ka dhigtaa dhagaha dhagaha ugu habboon ee lagu sameeyo isboortiga lagu dhageysto muusigga aan jecel nahay, tusaale ahaan.
SoundPeats Q30 sameecadaha dhagaha
Xaragada adabtarada x5
Cable clip iyo haysa
Bacda ku dayashada maqaarka
Buugga isticmaalaha (5 luqadood, oo ay ku jiraan Isbaanish)
Labada sameecadoodba waxay ku xiran yihiin fiilo khafiif ah oo ay gooyaan kaliya qolka xakamaynta multimedia. Intaas waxaa sii dheer, waxaan haysan doonaa boorso ay ku jiri doonaan illaa lix siddo dhegta iyo toban dhego-fur oo la is-weydaarsan karo si aan ugu raaxeysanno iyaga xaalad kastoo jirta. Sameecadaha dhagaha ayaa leh cabir guud 63,5 x 2,5 x 3,2 sentimitir, intay si fudud u yaryihiin, ayaanu foodda saaraynaa kaliya 13,6 garaam oo ah wadarta culeyska.
Qalabku sidoo kale waa muhiim, dhagaha maqalka waxa ugu horreeya, shaki la'aan, waa tayada maqalka. SoundPeats, in kasta oo ay bixiso alaab aad u jaban, waxay leedahay nidaam loo yaqaan 'Aptx system', koodhku wuxuu la jaan qaadayaa codka sare ee xallinta, tanna waxay u isticmaashaa jajab Nooca Bluetooth CSR8645 4.1 taasoo bixin doonta xog wareejin wanaagsan iyo adeegsi hooseeya. Waxaas oo dhami waxay ku milmayaan wadayaasha lixda milimitir, marka la soo koobo, dhawaqa ayaa ku habboon oo tayo ku filan leh iyadoo la tixgelinayo qiimaha qalabka, sIn kasta oo aysan ku xirnayn heerka beddelka sida JayBird, maskaxda ku hay inay ku kacayaan ugu yaraan shan jeer ka yar.
Madax-bannaanidu aad ayey muhiim ugu tahay wax soo saarka sida wireless-ka sidan oo kale. Waan ku raaxeysaneynaa 8 saacadood oo hadal ah ama muusig loo maqli karo (Waqtiga ciyaarta wuu ku kala duwan yahay heerka mugga iyo waxyaabaha maqalka ah, la hubiyey). Sidoo kale sameecadaha dhagaha la ’ee wireless-ka waxay sidoo kale haystaan ​​ilaa 100 saacadood oo heeggan ah iyaga oo qaata qiyaastii saacad iyo badh Kharashkan waxaa lagu sameeyaa iyada oo loo marayo fiilada microUSB ee ku jirta xirmada xirmada. Dhab ahaantii, is-maamulku wuu wanaagsan yahay, wuxuu ku dhow yahay siddeed saacadood oo SoundPeats ballanqaaday, aan dhahno xoogaa wuu ka hooseeyaa, laakiin waxay ka badan tahay kulammada isticmaalka maalinlaha ah.
Diyaar u noqo xaalad kasta
Muuqaal kale oo ay sameecadaha dhagaha la taagan yihiin ayaa si hufan ugu jira isweydaarsigooda. Si aan u bilawno waxaan leenahay iska caabin biyo IPX6 taasi waxay noo oggolaan doontaa inaan la jimicsano iyaga oo aan ka baqaynin inaan u jajabinno dhidid awgood, taas oo aan ka dhigayn inay quusin karaan, laakiin u adkaysi u leh inay la ciyaaraan isboorti iyaga oo aan wax cabsi ah qabin. Dhibic si aad ah loogu muujiyo dhagaha dhagaha. Waxaan tijaabinay waxqabadkooda iyagoo sameynaya isboorti waxaana dhihi karnaa inay si fiican dhagaha ugu hayaan dhib la'aan., maanaan la kulmin wax maqal lumis ah sidoo kale.
Muuqaal kale oo caan ah oo ka mid ah qalabka ayaa ah inay leeyihiin magnet qeybaheeda sare taasi waxay noo oggolaan doontaa inaan ku biirno, oo u rogo nooc silsilad ah, taas oo aad ugu raaxeysaneysa samaacadaha dhagaha ah ee sidan oo kale ah inay awood u yeeshaan inay beddelaan ka saarista iyo gelinta iyaga oo aan qasab ku dhigeynin bacda mar labaad, iyo tan ugu muhiimsan, cabsi la'aan iyaga luminaya. Tani waxay naga dhigeysaa inaan isticmaalno marar badan, sidoo kale magnet-ka ayaanu imtixaanka galnay oo waa xasilloon tahay oo in ka badan oo ku filan in lagu ilaaliyo dhegaha si ammaan ah ugu dheggan.
Waxaan tijaabin jirnay SoundPeats Q30 inta badan runtiina waxay tahay inay sifiican ugafiicanyihiin inta badan dhagaha dhagaha ee qeybahan qiimaha, gaar ahaan markay tahay dhagaha dhagaha wireless. Qaybaha intiisa kale marka laga hadlayo xaga wax soo saarka sida magnetka iyo gacan ku haynta isboortiga ayaa ah mid soo jiidasho badan markay tahay helitaanka qalabkan, waxaa laga heli karaa Amazon laga bilaabo 22,29 euro.
Xaqiiqdii waxay umuuqataa inay tahay iibsi macquul ah haddii aad raadineyso habka uguhoreeya ee qalab astaamahan leh, si dhib yar ayaad awoodi doontaa inaad wax badan ka hesho wax yar, iyadoo lagu xisaabtamayo waxyaabo kale tayada maqalka iyo qalabka.
Khadka lacag bixinta
Wareeg wareeg ah
Wadada buuxda ee maqaalka: War gadget » General » Reviews » SoundPeats Q30, waxaan ku lafagureynaa codka sare qiime jaban